Shirkadaha shidaalka ka soo saaraya Puntland oo faahfaahiyay qorshaha soo saarista shidaalka. – Radio Daljir
Shirkadaha shidaalka ka soo saaraya Puntland oo faahfaahiyay qorshaha soo saarista shidaalka.
Dubai,Jan 17 -Shirkadda Horn Petroleum Corporation oo iyadu gacanta ku haysa hawsha qodista shidaalka ee Dooxada Dharoor ee Puntland ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in ay ku faraxsantahay bilaabista qodista ceelka kowaad ee Shabeel-1 oo la bilaabay isniintii shalytoole.
Shirkadda ayaa sheegtay cabirka dhulka la qodayo shidaalka uu noqdo 3km iyo 800m.
Shirkadda Horn Petroleum Corporation oo iyadu saami ku leh qodista shidaalka ee Puntland ayaa tilmaantay in qodista loo adeegsanyo Riigga Sakson 501, waxana ay xustay in ay ku raja-weyn tahay in oqodistu iyo qiimaynteedu ay qaadato 90beri.
Shirkadda ayaa tilmaantay in la qiyaasay in illaa saddex boqol oo million oo birmiil oo shidaal ah laga soo saarikaro degaanka ay qodistu ka socoto.
madaxa iyo maamulaha shirkadda Horn petroleum ayaa sheegay in bilaabista shidaalka Dharoor ay tahay tallaabo wax ku ool ah hore loo qaaday, oo lagu qiimaynayo shidaalka ku jira waqooyiga Somalia.
Horn Petroleum ayaa xustay in ay taageero weyn ka heshay dawladda Puntland iyo dadka Puntland ee degaanka oo iyagu doonaya in dib loo bilaabo horumarkii dalka , kaddib 20 sano oo khilaaf ka jiray Somaliya.
Warsaxaafadeedka shirkaddani Horn Petroleum Corporation oo laga leeyahay dalka Canada ayaa sidoo kale lagu sheegay in shirkaddu ay leedahay 60% danaha gawlgalka qodista ee dooxada Dharoor iyo Nugaal ee Puntland ?Somaliya.
Dhinaceedana War saxaafadeed ay soo saartay shirkadda Africa Oil ayaa lagu sheegay in shirkaddaasi ay si weyn ugu faraxsantahay bilaabista qodista ee ceelka shabeel-1 ee Dharoor ee Puntland ,waxana ay sheegtay in shirkadda la hawlgelaysa ee Horn Petroleum Corporation, ay imika wado hawsha qodista ceelka kowaad.
Shirkadda Africa Oil ayaa xustay in ay leedahay 51% hantidda shirkaadda horn petroleum, isalamarkaana ay dano ku leedahay dalalka Kenya, Ethiopia , Mali iyo Puntland (Somalia).
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr C/raxmaan Sheikh Maxamed (Farole )ayaa si rasmi ah u furay qodista shidaalka ee dooxda Dharoor ee Puntland, waxana madaxweynuhu uu hore u sheegay in haddii shidaalka la soo saaro lagu horumarindoono dalka, islamarkaana la bilaabayo mashaariic dhinaca adeegyada bulshada ah.
Dawladii hore ee Puntland ee uu madaxwetynaha ka ahaa Gen Cadde Muuse Xirsi ayaa gashay heshiishyadda shidaalka ee Puntand sanaddii 2006-dii